स्मार्ट सिटीको अवधारणा पूरा गर्छुः राजेश अधिकारी - HAMRO YATRA
स्मार्ट सिटीको अवधारणा पूरा गर्छुः राजेश अधिकारी
काठमाडौं, बैशाख । स्थानीय निकायको चुनावका लागि दलहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवार चयनसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुले पनि विभिन्न एजेण्डा तथा घोषणा पत्र जारी गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा त झन चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । मेयर, उपमेयरका उम्मेदवार टुंगो लगाउन दलका नेताहरुलाई हम्मे हम्मे परेको अवस्था पनि विद्यमान छ । केही दलले सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यही बीचमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३ को अध्यक्षका आकांक्षी धेरै देखिए पनि राजेश अधिकारी भने खरो रुपमा उत्रिएका छन् । लामो राजनीतिक अनुभवसँगै सामाजिक रुपान्तरण र विकासको प्रमुख एजेण्डाका साथ उनि अघि बढेका छन् । उनले सरकारले ल्याएको स्मार्ट सिटीको योजना पूरा गर्न आफू तम्सिएका बताएका छन् ।
उनको बुझाइमा योजना तथा अवधारणाले मात्र विकास हुँदैन, विकासका लागि कुशल नेतृत्वसँगै कार्यान्वयको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि उर्जा, युवा जोश जाँगर र व्यवस्थापकीय पाटो महत्वपूर्ण हुुने भन्दै आफूमा यी सबै चुनौतीको सामना गर्न क्षमता रहेको बताए ।
स्मार्टं सिटीको सपना सार्थक तुल्याउन उनले स्थानीय निकायको महानगर चुनावमा विकास लागि राजनीति र सामाजिक रुपान्तरणलाई जोड दिँदै ‘युवाहरुको ऐक्यबद्धता स्मार्ट सिटीको प्रतिबद्धता भन्ने नारालाई अगाडि सारेका छन् ।
को हुन् राजेश ?
राजनीतिका अलावा सामाजिक कार्यक्रमा सक्रिय रहने राजेश अधिकारी काठमाडौंका बासिन्दा हुन् । उनले तीन दशकभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक विचाराधाराको राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेका छन् । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आफ्नो कार्यकाल सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेका राजेशले राजनीतिक यात्रालाई भने निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । सामाजिक रुपान्तरण र विकासका लागि एउटा युवा नेतामा हुनुपर्ने सबै गुण र क्षमता उनमा पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेस महाधिबेशन प्रतिनिधि,
२०५३ सालमा सालमा नेबिसंघका पूर्ब केन्द्रीय सदस्य,
२०५४ देखि तरुण दलमा पूर्णकालीन सदस्य,
कामनपा ३ मा पूर्व ईकाई सभापति,
गणेशमान सिंह स्मृति आपत बिपत कोषका संस्थापक अध्यक्ष,
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद बिकास समितिका पूर्व उपाधक्ष्य।
समाजसेवी तथा स्वतन्त्र लेखक (११३ स्तम्भहरु राष्ट्रिय दैनिकहरु देखि बिभिन्न पत्रपत्रिमा प्रकाशित)
साईबर क्राईम र सामाजिक अपराध बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमका सामाजिक अभियन्ता
के भन्छन् राजेश ?
झण्डै दुई दशक पछि हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनाव सफल पार्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाइनु हुन्न । पदीय लोलुपतालाई त्यागेर समाज सेवाको भाव राख्दै देश विकासलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइनुपर्छ ।
देशका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । पछिल्लो पटक आम सर्वसाधारणहरुमा देखिएको राजनीतिक वितृष्णा हटाउन राजनीतिज्ञहरुले त्यस्ता कदम चाल्नुपर्छ जसले राजनीति फोहोरी खेल होइन, देश विकासको महत्वपूर्ण नीति राजनीति हो भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि मतदाताहरुको पनि महत्वपूर्ण हात रहने औल्याए ।
नेतृत्व चयनमा मतदाताहरुको नै महत्वपूर्ण हात रहने हुँदा, मतदान गर्दा कसैको लोभ लालचमा नपरी सबैले विवेक प्रयोग गरी कुशल नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने तर्क अघि राख्छन् । यो चुनावले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा गति लिने भएको हुँदा चुनावमा विवेक प्रयोग गरौं, हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई प्राथमिकता दिऔं ।